Mass Production Kneader maka akpụkpọ ụkwụ  Kpọtụrụ ugbu a
Dust Proof Kneader  Kpọtụrụ ugbu a
75 Liters Banbury agwakọta igwe  Kpọtụrụ ugbu a
Ntinye ihe ntanetị nke LN-RS maka silicone Rubber  Kpọtụrụ ugbu a
Roba igwekota igwe Ihe Ngwakọta maka Mass Production  Kpọtụrụ ugbu a
Rubber Bubury Internal Kneader Mixer  Kpọtụrụ ugbu a
316 Iron Powder Dispersion Kneader Mixer  Kpọtụrụ ugbu a
LINA Varavable Speed ​​Mass Production Ngwakọta Mill A na-eji LINA Varaible Speed ​​Stock Blender Rubber Mixing Mill mee ọtụtụ ihe dị ka NBR, SBR, PP, EVA. Abụọ Roll Mill bụ igwe kachasị dị ize ndụ na ụlọ ọrụ roba, LINA na-anọgide na-azụlite ma na-emezi usoro nchekwa maka Open Mixing Mill. A na - esite na Germany,...
Bdị bdị Banbury Na-akpata Ahụhụ Maka Ngwunye Aluminom Oxide Site na mmelite nke MIM na CIM, teknụzụ na nka nke LINA plastic Dispersion Mixer for Aluminum Oxide Powder enweghị ike ọfụma ịchafụ roba na rọba plastik nwere viscoces dị elu kamakwa ọ nwere obere ntụpọ viscosity, dị iche iche elastomers, cimramic powder na...
Uridị bdị Banbury Na-akpata Mkpo Ahịrị Maka plastic plasta Site na mgbalite nke roba na-eri, teknụzụ na nka nke LINA Rubber Dispersion Mixer for Degradable plastic nwere ike ọ bụghị naanị igwighee roba na rọba plastik nwere viscosity dị elu kamakwa obere viscosity ọkara, solstomers dị iche iche, ụdị seramiiki na ihe...
Mgbu Typedị Banbury Mgbasa Dị Mkpa Maka Igwe ọkụ Volta High Site na mgbalite nke roba na-eri, teknụzụ na nka nke LINA Rubber Dispersion Mixer for High Voltage Cable nwere ike ọ bụghị naanị igwakọta roba na rọba plastik nwere viscosity dị elu, kamakwa obere ntụpọ viscosity, dị iche iche elastomers, igwe ceramic na ihe...
Mass Production Kneader maka akpụkpọ ụkwụ
LINA 20 Liters High arụmọrụ Mass Production Maka Mgbasa Kneader LINA Mass Production D ispersion Kneader abụghị naanị ịzọrọ roba na ihe plastik nwere viscosity dị elu, kamakwa ọkara-solids nwere viscosity dị ala, ọtụtụ elastomers, akwa seramiiki na ọtụtụ ihe ọhụrụ dị ka graphene wdg. nsonaazụ gbasasịrị site na LINA...
LINA 35 Liters Ejiri Ngwunye Mgbasa Nke Achọtara Ezigbo Ihe Ejiri Eme Iji izute taa factory mkpa, Lina esịtidem igwekota bụghị naanị ike mix roba na plastic ihe na elu-viscosity, ma a dịgasị iche iche nke elastomers, seramiiki ntụ ntụ na a dịgasị iche iche nke ọhụrụ ihe ndị dị ka Graphene wdg Ke adianade do, Lina roba...
LN-RS-90 Mpempe akwụkwọ Rubber Extruder LINA gbara Rubber Extruder ihe karịrị afọ iri abụọ. The Butyl Rubber Extruder Line nwere ike ahaziri site ina. Ọ bụghị naanị LINA na-aghọ ụlọ ọrụ nke teknụzụ dị elu, kamakwa ọ na-enyere ndị obodo aka. LINA bụ onye otu dị mkpa nke China Rubber Association na Mmụta Ndị Na-achụmnta...
LINA 4 Inch Second Roll Mepee Ngwakọta Mill Nzube nke LINA Abụọ Roll Open Mill na -ebute ụzọ na ụlọ ọrụ igwe na roba China. Esemokwu dị elu na nchekwa dị elu bụ ebumnuche ndị bụ isi nke LINA's Rubber Milling Machine . Na mgbakwunye, onye ọrụ enyi, nchekwa dị elu, njikwa akara dị elu, ịdịte aka dị elu na njikwa...
Ngwa: Rubberizing na irighiri akwara nke ịchafụ, ịcha akwa nke wayacord, mpempe akwụkwọ, na tebụl mkpuchi (embossed) nke ihe roba, nkewa nke akwa na ihe nkiri, yana nkwonkwo nke ihe eji eme otutu laminate. Okike ndi ozo: Ihe kachasị ya bụ rolle, rack, backplane, mmezi, ngwaọrụ, sistemụ nnyefe, ngwaọrụ njikwa okpomọkụ...
LINA 250 Ndị Na-egwu Mgbapụ atọ A na-eji LINA Atọ Calender Rolling Mill n'ọtụtụ ụdị dị ka NBR, SBR, PP, EVA. Calender ya na igwe egwu ato bu igwe di nkpa n in ulo oru roba, LINA na –emepe emepe ma mekwa ka nchekwa nchekwa di maka Mil Rolling Mill . A na - esite na Germany, Japan na Taiwan bute akụkụ nke LINA...
75 Liters Banbury agwakọta igwe
LINA 75 Liters High P roduction Dispersion Kneader LINA 75 Liters Mass Production R ubber P lastic ogige D ispersion esịtidem M ixer nwere nnukwu ihe ndozi, usoro ozigbo LINA na-enye ohere ndozi nke ihe igwekota, ihe uzo nri di nma. -Zọ inye nri nri na LINA Mass Production D ispersion K neader , ụdị ngwaọrụ ihe eji...
LINA 14 Inch Second Roll Mepee Ngwakọta Mill LINA Abụọ Roll Mepee Ngwakọta Ngwakọta nwere ọtụtụ ngwa dị na ụlọ ọrụ roba na rọba. Ngwa dị mma dịka SBR, NBR, BR, IR, EPDM, CR, PP, PC, PVC, EVA na ndị ọzọ. Mepee Mill Mill dị maka ịgwakọta ma ọ bụ mmepụta n'ime akwa na fim.The Twl Roll Mill bụ igwe kachasị dị ize ndụ...
LN-RS-90 Mpempe akwụkwọ Rubber Extruder LINA gbara Rubber Extruder ihe karịrị afọ iri abụọ. The Butyl Rubber Extruder Line nwere ike ahaziri site ina. Ọ bụghị naanị LINA na-aghọ ụlọ ọrụ nke teknụzụ dị elu, kamakwa ọ na-enyere ndị obodo aka. LINA bụ onye otu dị mkpa nke China Rubber Association na Entmụ akwụkwọ...
Ntinye ihe ntanetị nke LN-RS maka silicone Rubber
LN-RS-150 Roba Strainer LINA gbara Rubber Strainer ihe karịrị afọ iri abụọ. The Silicone Rubber extrusion strainer nwere ike ahaziri site ina. Ọ bụghị naanị LINA na-aghọ ụlọ ọrụ nke teknụzụ dị elu, kamakwa ọ na-enyere ndị obodo aka. LINA bụ onye otu dị mkpa nke China Rubber Association na Entmụ akwụkwọ Azụmaahịa Mmụta...
Ule nnwale maka Blue Internal Mixer Kneader maka ịgwakọta Rubber Compounding Ihe atụ a nke Dispersion Kneader ' s agwakọta rotors na agwakọta ụlọ nwere ike kpamkpam iche. LINA 1.5 Liters MIM Powder Dispersion Mixer dị mma maka nnukwu seramiiki na arịa ntụ ntụ nke nwere njiri anụ ahụ dị iche. LINA Igwe na Ngwunye...
Roba igwekota igwe Ihe Ngwakọta maka Mass Production
LINA Roba Mixer Machine Compound Mixer maka Mass Production Ejiri ụdị Mass Production Kneader a na ntọala Pressurized Kneader , ụdị flipping bụ hydraulic ma ọ bụ igwe eletriki, a na- anabatakwa ngwaọrụ nnụnnụ ikuku abụọ. LINA 2 lita Ekebere Typedị Newdị Mgbanye Eke Ọgba Nke a na-eme ka ụlọ uzuzu mkpuchi mechiri emechi...
Testdị Ime Nnwale Ọhụrụ Ọhụrụ Ejiri ụdị Lab a na-eji mmerụ ahụ Rubber Banbury Mixer mee ihe na ntọala nke Pressurized Dispersion Mixer , ụdị agbapụ ahụ bụ hydraulic ma ọ bụ eletriki, na ngwaọrụ nnabata okpukpu abụọ anabatara. LINA 2 lita Ekebere Ihe Nleta Ihe Ejiri Nzube Ihe Ejiri Nzube Ihe Ejiri Nweta PLC Kneader...
Testlọ nyocha nyocha Lab nke Kneader Banbury maka ihe gbasara rubber Emere ụdị a maka nyocha ihe nlele nyocha Lab na ntọala nke Pressurized Kneader , ụdị agbapụ ahụ bụ hydraulic ma ọ bụ eletriki, a na-anakwere ngwaọrụ nnabata okpukpu abụọ. LINA 2 lita Ezubere Typedị ooldị Esemokwu Ọhụrụ A na-ahụ maka mkpuchi uzuzu...
Ngwunye roba nke LINA eme na imeghari nke igwe maka S ole S hoes Isi ihe okike nke LINA plastic roba Extrusion Machine bụ ọkachamara maka ọtụtụ roba na rọba plastik nwere usoro anụ ahụ dị iche iche, yana koodu dị iche iche nke ịnwụ anwụ na-ekpo ọkụ & ịkpụcha ikuku, ịkpụ mmiri, ịkpụ mgbanaka mmiri, ịkpụ mmiri,...
Interdị bdị Banbury Mixer dị mma maka ịgwakọta ọtụtụ roba na ihe plastik. Rodị rotor dị iche iche nwere ike imeju ihe dịgasị iche site na usoro ihe. Igwe mmuta Banbury na Intermeshing Typedị Rotor nwere ike ịmepụta ma gwakọta roba, plastik, elastomer, poly-batch polymer na ndị ọzọ. Mesdị Interbalhing Rubber Banbury...
316 Iron Powder Dispersion Kneader Mixer
Ngwunye LINA bụ ụlọ ọrụ mbụ na-akwụ ụgwọ wee rụọ ọrụ na MIM na ụlọ ọrụ CIM nke China ma nwee teknụzụ dị elu nke Mkepe na Ceramic Powders Dispersion Kneader . LINA 1L Mini Internal Mixer bụ nke a ma ama na ọrụ eletriki eletriki na ceramik. N’agba ọhụụ nke ubochi taa, LINA Obere maka mmụba a na-eke ihe maka obere ihe...